परराष्ट्रमन्त्रीलाई प्रश्न- भाडा तिर्न नसक्ने नेपाल आउन पाउँदैनन् ? — janadristi
२९ जेठ २०७७, बिहीवार १३:४५
२९ जेठ, काठमाडौं । सरकारले विभिन्न देशमा रहेका नागरिकलाई स्वदेश ल्याउन चार्टर विमानको तालिका सार्वजनिक गरेर विमान भाडा आफैंले तिर्नुपर्ने भनेपछि भाडा तिर्न नसक्नेहरु आउन पाउने कि नपाउने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
जब कि सरकारले नै बनाएको प्राथमिकता सूचीमा रोजगारी गुमाएर बेखर्ची बनेका, विभिन्न मुद्दामा जेल बसेर आम माफी पाएका, बिरामी तथा अपांगता भएका, भिजिट भिसामा गएर रोकिएकाहरुलाई उद्धार गर्नुपर्ने पहिलो सूचीमा राखेको छ ।
त्यस्ता व्यक्तिहरुले दूतावासमा आफ्नो सबै विवरण बुझाइसकेका छन् । तर, उनीहरुको भाडा कसले ब्यहोर्ने भन्ने अन्योलकै कारण यसअघि दुबईबाट प्राथमकिता सूचीका व्यक्ति आउन पाएनन् ।
विमानले कम्पनीबाटै टिकट काटिएका अरु व्यक्तिलाई लिएर आएको थियो ।